Fanararaotana Ankizy Ao Torkia “Zavamisy” Ampanginin’ny Henatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2016 4:23 GMT
“Zazalahy kely kivy” (CC BY-ND 2.0) : Tjook
Tamin'ny volana lasa, mafana ao amin'ny faritry Torkia ny fanafintohinana fanararaotana ankizy maro be mifandray amin'ny fototra konservativa tohanan'ny ny fitondran'ny Antokon'ny Rariny sy Fampandrosoana(AKP) . Nosamborina ny lehilahy mpampianatra iray (MB) satria nahiana nanolana, fara fahakeliny mpianatra 10 tao amin'ny sekoly kilasimandry tsy miankina iray, maro amin'ireo no natsangan'ny Orina mpanasoa mpomba ny governemanta Ensar.
Nanamaizina ny antsipiriany maro tamin'ny raharaha ny fandraràna tanteraka ny fampitam-baovao mikasika ny fanadihadiana nataon'ny fitsarana tao an-toerana taoriana kelin'ny fipoahan'ny vaovao nanafintohina ,ary namela ny fampitam-baovao ao an-toerana ahafantatra zavatra kely monja.
Nefa sarotra hafenina kokoa ny olana goavan'ny fanararaotana ankizy ao Torkia.
Nitombo 50% tao anatin'ny dimy taona farany ny isan'ny tranga fanararaotana ankizy tao amin'ny firenena ary 125% tao anatin'ny 10 taona araka ny nolazain'ny Fikambanana Fanentanana Manohitra ny Fanararaotana Ankizy.
Mijaly amin'ny endriky ny fanararaotana samihafa rehefa mbola ankizy ny iray amin'ny lehilahy enina sy iray amin'ny vehivavy efatra hoy ny fanentanana .
Namoha ny hatezeram-bahoaka ny filazan'ny Minisitry ny Fianakaviana sy ny Politika Sosialy, Sema Ramazanoğlu, ao Torkia ny tohivakan'ny fanararaotana ao amin'ny renivohi-paritanin'i Karaman ho toy ny “iray amin'ny zavatra tsy mpitranga matetika”, sady nanakiana ny mpanohitra ao amin'ny parlemanta amin'ny fiantsoana hanaovana hetsika hamelezana ny orina mpanasoa amin'ny fikasana “hanala baraka” ny Ensar.
An'arivony no nitaky ny fialan'i Ramazanoğlu. Nalaza tao amin'ny Twitter ny #TecavüzAKlandi (dika ara-bakinteny. “nodiovina ny fanolanana”) rehefa nitarika rivo-tsikera manohitra ny governemanta ny mpikatroky zon'ny ankizy .
Ao anatin'izany fibontsinan'ny hatezeram-bahoaka [izany no] nampilefitra ny AKP tamin'ny fitakian'ny mpanohitra mba hananganana vaomiera momba ny fanararaotana ankizy izany, na dia azon'ny antokon'ny fitondrana aza ny toerana 9 amin'ireo 15 ao amin'ny vaomiera.
Tuncay Ozkan, solombavambahoaka avy amin'ny mpanohitra CHP, nisioka fotoana fohy taorian'ny fandavana ny fitsipaha-pitokisana natao tamin'ny Orina mpanasoa Ensar: “Nofoanana ny fitsipaha-pitokisana natao tamin'ny Minisitry ny Fianakaviana momba ny raharaham-panafintohinana fanolanana tao Karaman. Milahatra ny mpikambana ao amin'ny AKP mba hankalaza izany. “
“Ny olana lehibe indrindra atrehintsika amin'ny raharaham-panararaotana dia fiezahana hanafina azy”
Maro ireo vaovao mampalahelo nitranga tamin'ny fiandohan'ity volana ity avy any amin'ny faritra andrefana ao an-tanànan'ny Izmir izay nisamboran‘ny polisy olona noahiahiana ho nanao fanararaotana tamin'ny ankizy tamin'ny sekoly roa samihafa, sy tamin'ny faritra atsinanana tao an-tanànan'ny Van, izay nahitana mpampianatra teny anglisy nohadihadiana voalaza fa nikasikasika mpianatra lahy sy vavy ary nampijery mpianatra lahatsary mamoha fady.
Araka ny tatitra vao haingana navoakan'ny Bianet fikambanana mpanara-maso ao an-toerana , ankizy 64 tao amin'ny tanàna 14 samihafa no voantohintohina tamin'ny Martsa fotsiny, raha mpampianatra ny roa amin'ny dimy nahavanona fanararaotana tazonin'ny polisy.
Noho ny ezaka mba hamantarana bebe kokoa, nidinidinika tamin'i psikology klinika Cemre Soysal, manam-pahaizana momba ny psikolojian'ny ankizy, momba ny maha-zava-dehibe ny raharaha mifandray amin'ny Orina mpanasoa Ensar ary ny fitomboan'isan'ny tranga fihoaram-pahefana mihatra amin'ny ankizy ao Torkia ny Global Voices .
GV: Manohana tanteraka ny Orina mpanasoa Ensar hatreto ny governemanta. Ahoana, amin'ny fomba fijerinao, ny fiantraikany amin'ny fiainan'ny ankizy izay efa nohararaotina avy amin'izany fanohanana izany?
CS: We have no idea about how many children were affected [by this scandal] or what kind of support is provided by authorities. The ministry states psychosocial support has been provided. We also do not know whether the families’ [affected by the alleged abuses] are supportive or hostile towards their children. The families are mostly low-income families that may require the financial support the foundation offers. That is why they might be choosing to keep silent on the issue. What is certain in this case is that the children are in the most difficult position […]
CS: Tsy manan-kevitra isika momba ny hoe firy ny ankizy no tena niharan'ny fahavoazana [tamin'ilay fanafintohina] na hoe inona no karazam-panohanana omen'ny manam-pahefana. Nilaza ny Minisitera fa efa nisy ny fanohanana ara-tsaina natao. Tsy mahafantatra ihany koa isika na hoe ny fianakaviana [voakasiky ny lazaina ho fanararaotana] dia manohana na mankahala ny zanany. Kely fidiram-bola ny ankamaroan'ireo fianakaviana – izay mety mila ny fanohanana ara-bola avy amin'ny Orina mpanasoa. Izany no mahatonga azy ireo mety ho misafidy ny hangina momba ny olana. Ny azo antoka amin'ity tranga ity dia hoe eo amin'ny toerana sarotra indrindra ireo ankizy […]
Amin'ny tranga toy izany manontany ny tenany nandritra ny fotoana maharitra ny niharam-boina, miezaka hanombana raha fahadisoany ny fanararaotana . Manomboka ny fandresena ny ratra amin'ny fotoana ahafahany miteny “Tsy fahadisoako izany.” Izany no antony maha-zava-dehibe indrindra ny fanohanana ara-tsaina. Mety hieritreritra ny ankizy hoe: “Izany hoe, sarobidy kokoa noho ny anay ny ho avin'ny Orina mpanasoa”. Mety mihevitra ny tenany ho meloka sy tsy misy vidiny izy ireo. Izay mety hahatonga azy ireo hahatsapa ny vokatry ny ratram-po ho mafy kokoa.
Zava-dehibe ho an'ny ankizy maratra anaty ny sazy ara-drariny atao amin'ny mpanolana .
GV: Hatramin'ny nisian'ny raharaham-panafintohinana Orina mpanasoa Ensar, dia nahita vaovao bebe kokoa momba ny fanararaotana ankizy isika, raha milaza ny antontanisa fa nitombo 50% ny fanararaotana tao anatin'ny dimy taona farany. Tena nitombo isa tokoa ve ny heloka atao amin'ny ankizy, sa ilay tranga no lasa hita miharihary kokoa ?
CS: Tokony hamakafaka izany isika ary hihevitra ireo karazan-javatra miantraika any amin'ireo voka-panadihadiana ireo raha toa misy fikarohana manondro ny fitomboan'isan'ny tranga. Ny ezaka hanafenana azy no olana lehibe indrindra atrehintsika amin'ny raharaham-panararaotana. Mifandray indrindra amin'ny herisetra an-tokantrano izany, izay ny fahanginana matetika no heverina fa mety hatao kokoa, ho fankatoavana ny antanantohatry ny fianakaviana sy ny voninahiny. Natao sorona ilay niharam-boina mba ho fanajana ny rafitra antanantohatry ny fianakaviana. Koa satria zava-mitranga tsy tapaka ny toe-javatra toy izany, dia misy hantsana goavana eo amin'ny tatitra sy ny tena isa.
Na dia tsy mitsaha-mitombo aza tato ho ato ny fanararaotana [fampijaliana ankizy] dia efa zavamisy mampanahy nandritra ny taona maro izany. Nahasarika ny saina kokoa ilay izy hatramin'ny niresahan'ny governemanta sy ny vahoaka ny olana vao tsy ela akory dia .Tokony hodinihina ny antony raha misy fitomboana 50% ny tranga miseho. Ohatra, ny fahasamihafana eo amin'ny tanàna sy ny faritra, inona ny fepetram-piarovana misy ao amin'ny tanàna izay vitsy ny isan'ny tranga voatatitra, ary ny tena zava-dehibe dia ny fanombanana ny vokatr'ilay tranga. Soa ho antsika izany amin'ny fampandrosoana ny politika hiatrehana ny trangam-panararaotana.
GV: Karazana olana na ratra toa inona no atrehin'ny ankizy nanaovana herisetra any aoriana any, ary moa ve afaka manao zavatra ny fianakaviana mba hiarovana ny zanany amin'ny mety isian'ny fanararaotana?
CS: Mahatsapa ratram-po lehibe ny ankizy rehetra nanaovana herisetra […] Dingana mampalahelo ho an'ny zaza izany ratram-po izany . Mahatsapa fahatsapantena ho ratsy momba ny tenantsika isika mandritra ny fotoanan'ny ratram-po: ‘ Tsy misy ilaina ahy.’, ‘ Ratsy aho.’, ‘ Tsy mandry aho.’ Anisan'ny fahatsapan-tena ireo. Tokony omena fanohanana ara-tsaina ny olona niharan'ny fanararaotana aorian'izany mba ahafahany mandresy ireo fieritreretana ireo.
Ny fianakaviana noho izany dia tsy maintsy mampianatra ny zanany ny fomba hiarovana ny tenany ary mila manaja ny fetra azo atao amin'ireo zanany ireo ihany koa. Tena zava-dehibe tokoa ny tontolon'ny fiainana manokana. Raha misy herisetra, dia mila miaro ny tontolony manokana ny ankizy ary mila miantsoantso na mikihakiaka. Mila omena toky ny ankizy fa raha misy ny tranga fanolanana dia manohana azy ny fianakaviany, satria mety hifidy ny fahanginana izy ireo raha isalasalana izay lazainy.
12 Jolay 2020Shina
04 Janoary 2020Syria